Iprojekthi ye-Opensky i-777 ibambe ingxaki ye-swich.
umbuzo Iprojekthi ye-Opensky i-777 ibambe ingxaki ye-swich.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #662 by ricsmi
Ikhutshwe ize iqhube iProjekthi ye-Opensky Boeing 777 namhlanje kunye nomoya wayo othandekayo, yodwa ingxaki endikunayo kukuba i-swing holding hold swich ibonakala ingasebenzi.
Hlela umqhubi wecala ngokuzenzekelayo kwaye ubeke isihloko esikufunayo uze ucinezele i-swich yokubamba njengoko uyenayo kwezinye iinqwelo-moya, kodwa uvale nje kwikhosi yangoku, ndazama zonke iintlobo kodwa ihlala isenza into efanayo .
Naliphi na iingcamango, ngaba i-bug okanye ngaba ndiyenza nje engalunganga?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #664 by ricsmi
Ok ndiye ndazicingela, ndiya kufuneka ndisebenzise inkinobho ye-Nav Select, kungekhona i-nav, nto kuphela into ekhethiweyo ye-Nave isebenza kuphela kwi-cockpit ye-2d endiyiyo ukuyisebenzisa.
Ngoko ndiza kubuyisela umbuzo wam, nabani na owaziyo ukuba unako ukutshintsha iqhosha lokubamba kwi-cockpit ye-3d ukuya kwindawo ye-nav khetha endaweni?
Ixesha ukwenza page: 0.202 imizuzwana